Maitiro Ekuwana PR | Martech Zone
Maitiro ekuwana PR
Chitatu, October 30, 2013 Chipiri, Gunyana 29, 2013 Douglas Karr
Kana iwe uri wekutanga hukama hweveruzhinji, ita shuwa kuti utarise iyo yakazara Tungamira kune PR rakanyorwa naBrownstein & Egusa. Uye kune rumwe ruzivo nezve nzira dzePR, ita shuwa kuti uverenge iyo positi yevaeni - PR Zano Kubva Kune Aimbove VentureBeat Munyori - kubva kuna Conrad Egusa paakanakisa blog yaScott Monty. Kutenda kwakakosha kuna Marty Thompson yeiyo tsvaga!
Dai ndaizowedzera chero chinhu, raizove nhanho kumwe kunhu pakati pe3 ne4 paunenge uchinyatso tsanangura yako pitch. Ndine vamiririri vePR vakawanda vandiri pazita rekutanga na… uye mumwe munyori pane yedu blog nemvumo yekugovana chero ruzivo rwaanoda. Icho chikonzero ndechekuti munyori anonyatsoremekedza basa reblog redu uye haambo rishandise zvisina kunaka. Kuve neyakanaka, yakatarisana nenamo zvakakosha!
Tags: mazano ekutanga ku prbrownstein egusanongedzera ku prprzvinyorwa zvitsvahukama hwevanhu
TapSense: Yakazara Nongedzo kuMobile Kushambadzira ya2014
Gumiguru 31, 2013 pa 12:57 AM
Mhoro Douglas, ini ndaida kutaura zvakawanda, zvakawanda nekutenda nekugovana PR chishandiso chandakagadzira. Ndokumbirawo mugare mandiudza kana muchimboda chero chinhu.
Kune vaverengi veKushambadziraTechBlog, ndinofara kupindura chero mibvunzo nezve positi muchikamu chemashoko pano.